Gabdhaha Dahabka Jecelow.. Iska Fiiriya Tiknooljiyaddan Cusub | Xaqiiqonews
Gabdhaha Dahabka Jecelow.. Iska Fiiriya Tiknooljiyaddan Cusub
Aqoonyahanno ka tirsan machadka tiknoolajiyadda ee ku yaalla Zurich Switzerland ayaa sameeyey qaab dahab looga soo saari karo balaastikada.
Sida lagu baahiyey websaaytka uu leeyahay machadkan, inkastoo ay badatay dalabka saacadaha iyo jijimaha ka sameysan dahabka, haddana dadka waxa ay ka cabanaayeen dhibka ay kala kulmaan culeyska dahabka.
Aqoonyahanada sameeyey ikhtiraacan cusub ayaa sheegay in ay la yimaadeen xal waare oo qaadashada dahabka ka dhigeysa mid “raaxo ah”.
Baarayaasha ayaa isticmaalay hab dahabka ka dhigeysa mid qafiif ah oo si fudud loo qaadi karo.
Raphael Mizinga ayaa yiri “Dahabkan aan sameynay waxa uu leeyahay astaamo balaastiko, hase yeeshee wili waa dahab rasmi ah, haddii uu dhulka kaga dhaco waa sida balaastikada oo kale”.
Sidoo Kale Aqri..5 shaqo Oo Tiknoolajiyadda Darteed Booska Ka Bixi Doono
Mizinga ayaa intaasi ku daray “Dahabka noocan ah waxaa uu kuu fiicanahy saacadaha, jijimaha, iyo qalabka kale ee lagu labisto, intaasi oo kaliya ma ahee sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dhamaan qalabyada elektaroonikada ah.”.
Dahabka cusub ayaa la sheegay in 1.7gram uu u dhigmo 15gram oo noocyadii hore ah.